Ma laga yaabaa in Biden uu ciidamadii Trump uu la baxay dib ugu celiyo Soomaaliya ? • Oodweynenews.com Oodweyne News
Ururka Qareenada Somaliland Oo Ka Hadlay Arrinta Hoodo Garays
“Damacaygii, Doodaydii iyo Dudmadaydii waxa la mooday inaan Kulmiye ka tagay ee…”
Guddoomiye Faysal Cali Waraabe Oo Ka Hadlay Qadiyadda Hoodo Garays Iyo Hooyadeed.
“Doorta Xildhibaano Wax Ka Qabta Dayaca Waddooyinka Caasimadda Hargeysa “
Daawo Beesha Cabdi Xaammud oo Ceerigaabo 2 murashax isku raacay
Liiska Musharaxiinta Tartamaya Oo Ku Soo Wada Idlaaday Xarumaha Dhexe Ee Xisbiyada Qaranka Ee Hargeysa
Warbaahinta Burco oo Dhaleeceeyey Afhayeenka Booliska Arinkii Hoodo Garays iyo Hooyadeed
“Soomaaliya Waxaan Leeyahay Somaliland Aqoonsada, Si Aad Idinkuna Wax U Noqotaan…” Korneyl Caarre
Masuuliyiinta xisbiga Waddano Oo Lagu Soo Dhaweeyay Gobolka Sool
Biden Oo Qaaday Xayiraadii Trump Saaray Dadka codsanaya Degenaanshaha Maraykanka.
Ma laga yaabaa in Biden uu ciidamadii Trump uu la baxay dib ugu celiyo Soomaaliya ?
News DeskJanuary 22, 2021
Madaxweynihii Mareykanka ee xilka ka degay, Donald Trump ayaa 15-kii bishan amray in ciidamada Mareykanka ka jooga Soomaaliya laga soo saaro.
Mareykanka waxaa Soomaaliya ka joogay 700 oo ciidamo ah, kuwaas oo ciidamada Soomaaliya ka caawiya la dagaallanka al-Shabab iyo mintidinta kooxda isku magacowday Dowladda Islaamka.
Diblomaasiyiinta iyo kooxaha korjoogtada ah ayaa ka digaya in – dalkan oo muddo soddon sano ku jiray xaalado jahwareer leh – uu mar kale qarka u saaran yahay fowdo, iyadoo dadaalka dib u dhiska Soomaaliya uu haatan khatar ku jiro
Xilliga uu Mareykanka ciidankiisa kala baxay Soomaaliya ayaa ku soo aadey iyadoo doorasho ay ku soo fool leedahay dalka, lagana baqayo in khilaafka ka taagan hannaanka doorashada uu dhibaato horseedo.
“Soomaaliya waxay ku jirtaa xilli muhiim ah,” Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, James Swann, ayaa sidaas BBC-da u sheegay, isagoo ka digay in dhaqanka hoggaamiyeyaasha qaranka iyo kuwa gobollada – ee isku haya hannaanka doorashada baarlamaaniga ah ee dadban- uu horseedi karo rabshado.
Go’aanka Trump ayaa ka nixiyay qaar ka mid ah Soomaalida gudaha dalka ku sugan, kuwaas oo madaxweynaha cusub Joe Biden ka codsaday inuu wax ka beddelo arrintaas.
Sanator Ayuub Ismaaciil Yuusuf ayaa go’aankaas ku tilmaamay “mid aad looga shalleyn karo”. Wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka ay wax weyn ka qabteen tababarka iyo tayada ciidamada Soomaaliya.
Milkiilaha hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho, xildhibaan Cabdullahi Maxamed Nuur, oo weerar lagu qaaday hoteelkiisa bishii August ee sanadkii hore ay ku dhinteen 15 qof, ayaa walaac weyn ka muujiyay in ciidamada Mareykanka laga saaro Soomaaliya.
“Aad ayay inoo dhibeysaa,” ayuu yiri milkiilaha hoteelka. “Weli waan u baahannahay Ameerikaanka, gaar ahaan dhanka ammaanka.”
Haddaba, madaxweynaha cusub ee Mareykanka, Joe Biden, ciidanka Mareykanka dib ma ugu celin karaa Soomaaliya?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bilaabay inuu wax ka beddelo qaar ka mid a siyaasadihii ugu waaweynaa Donald Trump, saacado kaddib markii la dhaariyay
“Ma jiro waqti la luminayo marka ay timaaddo wax ka qabashada xasaradaha aan wajaheyno,” ayuu barta Twitter-ka ku soo qoray xilli uu ku sii jeeday Aqalka Cad.
Sharciyada horyaalla waxaa ka mid ah kan muranka badan dhaliyay ee mamnuucista safarka lagu tagi karo Mareykanka, ee dalalka qaar oo Soomaaliya ay ka mid tahay uu kusoo rogay madaxweynaha isaga xilka uu kala wareegay ee Donald Trump.
Madxaweyne Biden ayaa khudbadiisii caleema saarka ku sheegay in Mareykanka uu hagaajin doono xiriirka caalamka, iyadoo mararka qaar ay khudbadiisa u muuqatay mid uu ku durayo siyaasadda maamulkii ka horreeyay ee Trump.
“Dib baan u hagaajin doonnaa xulafadeennaa dunidana mar kale ayaan la macaamili doonnaa,” ayuu yiri.
Biden wuxuu bishii Oktoobar ee sanadkii hore cambaareeyay go’aankii uu Donald Trump ciidamada Mareykanka uga saaray Suuriya.
Iyadoo 100-ka maalmood ee ugu horreeya madaxtinnimadiisa uu qorsheynayo inuu wax badan ka beddelo qaar ka mid ah siyaasadihii Donald Trump, haddana ma cadda inuu xisaabta ku darsan doono ciidamada Mareykanka ee laga saaray dalal ay Soomaaliya ka mid tahay.
Afhayeenka Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika Col. Chris Karns oo la weydiiyay in maamulka Madaxweyne Joe Biden uu wax ka beddeli doono arrintaas, ayaa sheegay inaan hadda la saadaalin karin.
Ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Soomaaliya waxay wadashaqeyn la lahaayeen kuwa AMISOM ee ka socda Midowga Afrika, Soomaaliyana ku tagay qaraar kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Bishii Abriil ee sanadkii lasoo dhaafay ayuu madaxweyne Donald Trump saxiixay wareegto uu ku kordhinayay xilliga ay ciidamada Mareykanka howlgallada gaarka ah u joogayaan Soomaaliya, isagoo ku daray hal sano oo kale.
Hase yeeshee, iyadoo laga yaabo in muddo kordhintaas ay ahayd tii ugu dambeysay, haddana saraakiisha difaaca ee Mareykanka waxay sheegeen howlgalka Soomaaliya uu qaadan karo sannado kale.
In ka badan saddex sano ayey koox Mareykan ah oo howlgal khaas ah loogu talagalay ku suganaayeen Soomaaliya. Shaqada ugu badan ee ay hayaan waa inay dowladda Soomaaliya ka caawiyaan arrimo ay ka mid yihiin:
Saraakiisha milatariga ee Mareykanka ayaa asaasay ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee loo yaqaanno Danab, kuwaasi oo ay tiradooda kor u dhaafeyso 3,000 askari.
Waxyaabaha kale ee ay milateriga Mareykanka ka sameeyaan Soomaaliya waxaa ka mid ah duqeymaha loo adeegsado diyaaradaha uusan duuliyaha saarneyn ee drones-ka, kuwaasoo lagu bartilmaameedsado saldhigyada iyo dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab.
Faragalinta milateriga Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo billaabatay sanadkii 2007-kii, markaasoo duqeymo ay fulisay diyaaradda nooceedu yahay AC-130 lagu dilay dad ay rayid ka mid yihiin.
Sanadkii 2019-kii ayey ciidamada Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen duqeymihii ugu badnaa abid, oo gaarayay ilaa 60 weerar oo xagga cirka ah.
Weerarradaas oo la kala fuliyay bilihii Janaayo, Febraayo, Maarso, Abriil, Luulyo, Agosto, Oktoobar, Nofeembar iyo Diseembar ayaa lagu dilay in ka badan 200 oo ka tirsan xubnaha Al-Shabaab iyo dad shacab ahba.